Warshadda Dharka - Soosaarayaasha Dharka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Waxaan si joogto ah u fulineynaa ruuxdayada '' Innovation keenista horumar, tayo sare leh hubinta quudka, Maareynta kor u qaadista faa'iidada, Diidmada soo jiidaneysa macaamiisha Dharka,,,, Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay nala soo xiriiraan taleefan ama noo soo diraan su'aalaha boostada xiriirka ganacsi ee mustaqbalka iyo ku guuleysiga guul wada jir ah. Isticmaalka barnaamijka maareynta tayada sare ee sayniska oo dhameystiran, tayo sare leh iyo iimaan sare, waxaan helnaa sumcad weyn oo waxaan ku mashquulsan nahay warshaddan Dharka, Shirkadeena waxay u hoggaansami doontaa "Tayada marka hore,, kaamilnimada weligeed, dadka u janjeedha, hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda". Shaqo adag si aad u sii wadato sameynta horumarka, hal-abuurnimada warshadaha, sameyso dadaal kasta oo aad ku sameysid ganacsiga heerka koowaad. Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican ee aan u dhisi karno habka maareynta sayniska, si aan u baranno aqoon xirfadeed oo fara badan, si aan u horumarinno qalabka wax soo saarka horumarsan iyo habka wax soo saarka, si loo abuuro alaabada tayada-wicitaanka ugu horreysa, qiimo macquul ah, adeeg sare oo tayo sare leh, gaarsiin deg deg ah, si laguu abuuro qiime cusub.
Vest-ka suufka leh ee Man
Jaakadani waxay u xidhan tahay ragga. Kolleelka dhaadheer iyo dharka kala duwan oo lagu tolo shandadaha badan.
Gacmo-iska-Bixinta iyo Jaakadda Hood ee Carruurta iyo Marwooyinka
Qaabkani waa labo labo. Naqshaddani waxay ku habboon tahay carruurta iyo marwooyinka labadaba Naqshadeynta waa daboolka laga saari karo iyo gacmo gacmeedyo jiinyeer naylon ah.Ka qaad gacmaha, waa la beddeli karaa jaakad